Molar mass ngegesi
Molar calculator ubunzima
Calculator Molar mass ngegesi, ubalo intanethi - uvumela ukubala ubunzima kucola irhasi ngobuninzi, ubunzima, ubushushu negesi uxinzelelo elinikiweyo.
Khetha irhasi kuluhlu okanye ungangenisa iiparameter
Igesi parameters igesi
Amanzi (H2O) Argon (Ar) Carbon monoxide (CO) Ethanol (C2H6O) Ihelium (He) Ioksijini (O2) Methane (CH4) Nitrogen (N2) Propane (C3H8) Sodium chloride (NaCl) Sodium hayidroksayidi (NaOH) Sulphur dioxide (SO2) Umoya Umoya omdaka (CO2) Yeehidrojeni (H2)
cube sentimitha cube imitha cube intshi iinyawo cubic
grams nekhilogram iigram neekhilogram
Umoya Pascal limitha of HG mm. lomxholo amanzi intshi HG intshi lomxholo amanzi Phawundi metres nganye. Unyawo Phawundi metres nganye. Intshi
Bala ubunzima kucola yomoya
Ubunzima Molar na ipropati emzimbeni ichazwa ubunzima into elinikiweyo lahlulwe isixa kwayo kweziyobisi, ngoko ke kukho ubunzima enye nolovane kweziyobisi. ubunzima Molar lichazwa emthethweni igesi efanelekileyo (Equation Mendeleev-Clapeyron):
apho - Ingcinezelo igesi, - Kucola ivolyum, - Ubunzima ngegesi, - Kucola ubunzima, - Rhoqo negesi yendalo, - Lobushushu ingundoqo
Molarity calculator yoxinaniso ifomula
Bala yoxinaniso kucola, ubunzima ezimbaxa, umthamo kunye nobunzima ifomula isisombululo imichiza.
Umlinganiselo unit Converter
Intanethi metric conversion sokubala: ubude, indawo, ubungakanani, ubushushu, isantya, uxinzelelo, amandla.
Ukukhawulezisa Tangential calculator ifomula
Bala ukukhawulezisa tangential kukho into ihamba ngokuthi kutshintshwe velocity ekuhambeni kwexesha.
Bala umthamo kunye yoxinaniso (molarity) of isisombululo ngaphambi nasemva amachiza.